I-Texas v. Johnson (1989): Ngaba ukutshabalalisa i-Flag Can Be Crime?
Ngaba i-Flag igubha ukuthumela umyalezo wezopolitiki?
Ngaba urhulumente unamagunya okwenza ubugebengu bokutshisa ifulegi yaseMelika? Ingaba ibalulekile ukuba iyingxenye yokubhikisha kwepolitiki okanye indlela yokubonisa imbono yezopolitiko?
Le mibuzo yayibuzwa kwimeko yeNkundla ephakamileyo ye-1989 yaseTexas v. Johnson . Kwakuyisigqibo esinqakathekileyo esabangela ukuba kubuyiselwe ukukhutshwa kweflegi efunyenwe kwimithetho yamanyathelo amaninzi.
Imvelaphi eya kwi- Texas v. Johnson
INgqungquthela yesizwe yaseRepublican ka-1984 yenzeke eDallas, eTexas.
Ngaphambi kwesakhiwo sendibano, uGregory Lee (Joey) uJohnson wagxininisa ifulegi yaseMerika e-kerosene wayitshisa ngelixa echasa imigaqo kaRonald Reagan . Ezinye izibhikishi zahamba kunye nokucula "iMelika; obomvu, omhlophe nombala obomvu; Siphalaza kuwe. "
UJohnson wabanjwa waza wagwetywa phantsi komthetho waseTexas ngokumelene ngokuzikhethela okanye ngokuziqhelisa ngokucacileyo i-flag okanye yesizwe iflegi. Wahlawuliswa u-$ 2000 waza wagwetywa unyaka omnye entolongweni.
Wabhenela kwiNkundla ePhakamileyo apho iTexas yaxela ukuba inelungelo lokukhusela iflegi njengophawu lomanyano kazwelonke. UJohnson wagxeka ukuba inkululeko yakhe yokuzivakalisa ikhusela izenzo zakhe.
I-Texas v. Johnson: Isigqibo
INkundla Ephakamileyo yagweba u-5 ukuya kwe-4 ukuthanda uJohnson. Baligatye ibango lokuba ukuvinjelwa kwakudingeka ukukhusela ukuphulwa koxolo ngenxa yecala lokutshisa ifulegi.
Isikhundla sikaRhulumente ... sithatha ibango lokuba abaphulaphuli abathintela ukukhutshwa ngokukodwa ngokubhekiselele kwintetho, mhlawumbi banokuphazamisa uxolo kwaye loo nto inokuthi ingavunyelwe kule siseko. Iziganeko zethu azikhombisi ukucinga okunjalo. Ngokuchasene noko, bayaqonda ukuba inqununu "umsebenzi wenkululeko yamazwi phantsi kwenkqubo yethu yorhulumente kukumema ingxabano. Kungenene kunokwenzeka ukuba isebenzise ngakumbi injongo yayo xa ikhupha imeko yokubandezeleka, idala ukunganeliseki ngeemeko njengoko kunjalo, okanye ... kubangela ukuba abantu bacasuke. "
I-Texas yathi babefuna ukulondoloza iflegi njengophawu lomanyano kazwelonke. Oku kwanciphisa icala labo ngokuvuma ukuba uJohnson wayevakalisa ingcamango engathandekiyo.
Ekubeni umthetho uthe ukunyanzelwa komthetho kungekho mthethweni ukuba "umdlali wecala uyazi ukuba kuya kubacaphukisa kakhulu umntu okanye abantu abaninzi," inkundla yabona ukuba iinzame zombuso zokulondoloza isimboli zazibophelelwe kumzamo wokuthintela imiyalezo ethile.
"Ukuba u-Johnson unyango lweflegi waphula umthetho waseTexas ngokuxhomekeka kwimeko echaphazelekayo yokuthetha ngokuziphatha kwakhe."
UBulungisa uBrennan wabhala ngoluvo oluninzi:
Ukuba kukho umgaqo wendlela yokuqulunqa, okokuba uRhulumente akanakwenqabela ukubonakalisa ingcamango nje ngokuba uluntu lufumanisa imbono ngokwayo okanye ayivumelaniyo. [...]
[F] ukugweba isohlwayo sobugebengu ngenxa yokuziphatha njengokuba uJohnson akayi kubeka engozini indima ekhethekileyo edlalwa yiflegi yethu okanye iimvakalelo eziyichukumisayo. ... Isigqibo sethu kukuqinisekiswa kwemigaqo yenkululeko kunye nokubandakanya ukuba iflegi ibonakalise kakuhle, kunye nokuqinisekiswa ukuba ukunyamezela kwethu ukugxekwa njengoJohnson kukuphawu kunye nomthombo wamandla ethu. ...
Indlela yokulondoloza indima ekhethekileyo yeflegi kungekhona ukubahlwaye abo abavakalelwa ngokungafaniyo ngale miba. Kukubaxhobisa ukuba baphosakele. ... Sinokucinga ukuba akukho mpendulo efanelekileyo ekutshiseni ifulegi kunokuba igawulwe yodwa, akukho ndlela engcono yokulwa nomyalezo womtshatshali weflegi ngaphandle kokubhengeza iiflegi ezitshisayo, akukho ndlela yokugcina isithunzi neflegi esitshisa - njengokuba ubungqina obunye apha buyenzile - ngokutsho kwayo kuqhubeka kungcwaba. Asingcwalisisi ifulegi ngokuhlawula ukuchithwa kwayo, kuba ngokwenza njalo sinciphisa inkululeko ukuba le mpawu ibonakaliswe.
Abaxhasayo bokuvalwa kweflegi ukutshisa bathi abazami ukunqanda ukubonakalisa izimvo ezihlambalazayo, nje kuphela izenzo zomzimba. Oku kuthetha ukuba ukuhlambalaza umnqamlezo kunokugqitywa ngenxa yokuba kuvimba kuphela izenzo zomzimba kunye nezinye iindlela zokubonisa izimvo ezifanelekileyo zingasetyenziswa. Noko ke, bambalwa, baya kwamkela le ngxabano.
Ukutshisa ifulegi kufana nehlobo lokunyelisa okanye "ukuthatha igama leNkosi ngeze," kuthatha into ehloniphekileyo kwaye iguqulwe ibe yinto ethile, ingcolileyo, kwaye ingafanelekanga inhlonipho. Yingakho abantu bacasulwa xa bebona iflegi itshiswa. Kwakhona kutheni ukutshisa okanye ukunyanzeliswa kukukhuselwa - njengokuba uhlambalaza.
Ukubaluleka kweSigqibo seNkundla
Nangona nje kuphela, iNkundla inamathele ngentetho yamahhala kunye nentsholongwane yamahhala malunga nomnqweno wokunciphisa intetho ngokulandelelanisa imicimbi yezopolitiko.
Le meko yavelisa iminyaka yengxoxo malunga nenjongo yeflegi. Oku kubandakanye iinzame zokulungiswa komGaqo - siseko ukuvumela ukunqanda "ukuchithwa ngokomzimba" kweflegi.
Ngokukhawuleza, isigqibo saphefumlela iCongress ukuba iqhube ngokukhawuleza kwiNgqungquthela yoKhusela i-Flag Flag ka-1989. Umthetho wenzelwe kungekho nanye injongo kodwa ukuvimbela ukutshatyalaliswa ngokomzimba kweflegi yaseMelika ekuhambeni kwesi sigqibo.
I-Texas v. Johnson Dissents
Isigqibo seNkundla ephakamileyo e- Texas v. Johnson yayingavumelani. Izigwebo ezine - White, O'Connor, Rehnquist, kunye noStevens - abavumelani nento enkulu ininzi. Abazange babone ukuba ukuthetha ngesigidimi sezopolitiko ngokutshisa ifulegi kukhulu kunomdla woluntu ekukhuseleni ukunyaniseka kweflegi.
Ukubhalwa kweeNkundla ezimhlophe kunye no-O'Connor, uMgwebi oyiNtloko uRehnquist wathi:
[T] ukutshisa esidlangalaleni kweflegi yaseMerika nguJohnson kwakungekho nxalenye ebalulekileyo nayiphi na inkcazo yeengcamango, kwaye ngelo xesha kwakunomkhuba wokuvuselela uxolo. ... [Ukutshisa kukaJohnson kweflegi] ngokucacileyo kwabonisa ukuba uYohnson wayengamthandi gqitha ilizwe lakhe. Kodwa isenzo sakhe ... asihambisanga nto ayingenakuyithunyelwa kwaye ayizange ihanjiswe njengendlela eneendlela ezininzi ezahlukeneyo.
Ngalolu hlobo, kuya kuba kuhle ukuchasisa indlela umntu ebonisa ngayo ukuba ezo ngcamango zingabonakaliswa ngezinye iindlela. Oku kuya kuthetha ukuba kulungile ukuvala incwadi xa umntu ekwazi ukuthetha amagama endaweni yoko, akunjalo?
URehnquist uyavuma ukuba ifulegi inendawo ekhethekileyo kuluntu .
Oku kuthetha ukuba enye indlela yokuthetha engayisebenzisi iflegi ayiyi kuba nefuthe elifanayo, ukubaluleka, okanye intsingiselo.
Ngaphandle kwimeko yokuba "umfanekiso omnye ufanelekile ngamawaka ayiwaka," iiflegi ezivuthayo zilingana nokulinganisa okanye ukukhala, okubonakala kubulungisa ukuthetha, kusenokwenzeka ukuba uvumeleke ukuba ungabonakali nantoni na, kodwa ukuxhathisa abanye.
Ukuqhawula kunye nokugubungela akuphefumleli imithetho yokuvalela, nangona kunjalo. Umntu ogalela esidlangalaleni ubhekwa njengento engaqhelekanga, kodwa asibajezisi ngenxa yokungaxoxiswanga kwizivakalisi ezipheleleyo. Ukuba abantu baxhatshazwa ngokutshatyalaliswa kweflegi yaseMelika, ngenxa yento abakholelwayo ekwaziswa ngezo zinto.
Ngokwahlukana okuhlukileyo, uLobert Stevens wabhala:
[O] akahlose ukuhambisa isigidimi senhlonipho ngeflegi ngokuyitshisa kwisikwere sikawonkewonke unokwenza unetyala lokungcola ukuba uyazi ukuba abanye - mhlawumbi ngenxa yokuba bengayifumani imilayezo ejoliswe kuyo - baya kukhubeka kakhulu. Enyanisweni, nokuba umdlali wecala uyazi ukuba onke amangqina anokwenzeka aya kuqonda ukuba uzimisele ukuthumela umyalezo weentlonipho, usenokuba netyala lokunyaniseka ukuba uyazi nokuba oku kuqondwa akunciphisi ityala elithatyathwe ngamanye amangqina.
Oku kuphakamisa ukuba kuvunyelwe ukulawula intetho yabantu ngokusekelwe kwindlela abanye abaya kuyichaza ngayo. Yonke imithetho echasene " nokuhlambalaza " ifulegi yaseMerika yenza njalo kwimeko yokubonakalisa esidlangalaleni iflegi eguqulelwe. Oku kuya kusebenza kwimithetho enqanda ukukhawulela umqondiso kwiflegi.
Ukukwenza ngasese akukophulo-mthetho. Ngoko ke, inzakalo ekukhuselweni kufuneka ibe "yingozi" yabanye abantu beshumayela oko kwenziwa. Akunakukuthintela ukuba bangakhubeki, ngaphandle koko, intetho kawonkewonke iya kuncitshiswa.
Kunoko, kufuneka ukuba kukukhusela abanye ukuba bafumane isimo sengqondo esichaphazelekayo ngokubhekiselele ekuchazeni iiflegi. Ngokuqinisekileyo, akunakwenzeka ukuba umntu uza kutshutshiswa ngenxa yokunyelisa iflegi ukuba ngaba omnye umntu okanye abantu ababini abanomdla. Oku kuya kugcinwa kwabo bavusa amaninzi amakhulu amangqina.
Ngamanye amazwi, iimfuno zesininzi ukuba zingabhekana nento engaphezulu ngaphandle kwezinto ezilindelekileyo eziqhelekileyo zinganciphisa ukuba zeziphi iindidi zeengcamango eziboniswayo (kwaye ngayiphi indlela) ngabancinci.
Lo mgaqo ungaphandle kwamanye amazwe kumgaqo-siseko kunye kwanomgaqo-siseko wenkululeko. Oku kwachazwa ngokugqithisileyo kunyaka olandelayo kwimeko yokulandelwa kweNkundla ePhakamileyo ye- United States v. Eichman :
Nangona ukutshatyalaliswa kweflegi - njengengqungquthela yobuhlanga kunye nenkolo, ukunyanzelwa kobuqhetseba bokuqulunqa, kunye neengqungquthela ezinobungozi - kunqwenela kuninzi, uRhulumente akanakwenqabela ukubonakalisa ingcamango nje ngenxa yokuba uluntu lufumanisa ingcamango ngokwayo okanye ingavumelaniyo.
Ukuba inkululeko yokuthetha ibinayo nayiphi na into eyinyani, kufuneka ikhuphe inkululeko yokuvakalisa iingcamango ezingenakonwabisayo, ezikhusayo, ezingavumelaniyo.
Ngokuchanekileyo okokutshisa, ukuphazamisa, okanye ukuhlambalaza ifulegi yaseMerika kudla njalo. Kuyafana nokuchasana okanye ukuhlambalaza ezinye izinto eziqhelekileyo. Urhulumente akanalo igunya lokunciphisa ukusetyenziswa kwabantu ngezinto ezinjalo ukuthetha kuphela nemilayezo evumelekileyo, engqinelanayo neyingozi.
Ingxaki kunye neengxaki: Iingongoma kunye neengcinga kwiCistoralist Thinking
Ukwenza izimpembelelo zokuphucula ukuqonda ukuFunda
Iincwadi eziMnandi kunye neeMagazini
Iyiphi iBhakethi e-Bowling?
Iyintoni i-'Gufi-eyimfihlo 'yoGalofu?